Iindaba -Vuthelani umnxeba wendibano yokulwa ubhubhane! Kulungile uvelisa iiseti ezingama-200 zezixhobo zemaski ngenyanga!
Vuthela umnxeba wendibano yokulwa ubhubhane! Kulungile uvelisa iiseti ezingama-200 zezixhobo zemaski ngenyanga!
Ukusukela u-Academician uZhong Nanshan ebhengeze ukosulelwa kwabantu yi-Wuhan's coronavirus entsha kwi-CCTV ngoJanuwari 20, 2020, ubhubhane waseWuhan luchaphazele iintliziyo zabantu abayi-1,4 bhiliyoni baseTshayina. Ngelixa sithathela ingqalelo ubhubhane, wonke umntu sele eqale ukuthathela ingqalelo impilo kunye nokhuseleko lwabo kunye neentsapho zabo. Ngomhla kaJanuwari 21, iimaski zeHubei beziphelile, kwaye ke imaski inqabile kwilizwe liphela, kwaye beziphelile, zibangela ukuba inkohliso ikhukule kwimarike.
Kwi-2019, ukukhutshwa kweemaski ezilahlwayo e-China yayili-4.5 yezigidigidi ngonyaka, ngomndilili we-3.2 iimaski ngomntu ngamnye ngonyaka. Njengoko amaTshayina engenawo umkhwa wokusebenzisa iimaski mihla le, uninzi lweemaski zelizwe lethu zithunyelwa kumazwe angaphandle. Ukusukela oko kwaqhambuka i-coronavirus entsha eWuhan, phantse wonke umntu onokuthenga iimaski unxiba iimaski mihla le. Esi siganeko sivakalise ukuvusa abantu kwaye siphakamisa ulwazi lwabo lokuzikhusela. Ukusetyenziswa kweemaski ezilahlwayo kuya kuba yinto eqhelekileyo. Kwixesha elizayo, ibango lemaski ezilahlwayo kwilizwe lam yi-51.1 yezigidigidi, ukusilela kwi-46.6 yezigidigidi ngokusekwe ekusetyenzisweni komntu omnye ngeentsuku ezili-10, oko kuthetha ukuba ibango liya kunyuka ngaphezulu kwamaxesha ali-10 kulo nyaka nakwixesha elizayo.
Itekhnoloji ye-Ok yeTekhnoloji-umthengisi waseTshayina ohambisa izixhobo, waphinda wahlaziya irekhodi!
Inkampani yokuqala kolu shishino ikhokela ekunikeleni nge-RMB 1 yezigidi ezinkozo.
inkampani yokuqala yophando kushishino kunye nokuphuhlisa umgca wemveliso yemaski elahlwayo, imaski elahlwayo enye-isiqwenga, ingxowa yokuthunga, ibhokisi kunye nelayini yokupakisha umgca wemveliso.
Ukuphendula ikhwelo leqela kunye norhulumente, abantu abalungileyo basebenze imini nobusuku ukulwa ubhubhane we-coronavirus kwaye ekugqibeleni baqonda ukukwazi ukuvelisa iiseti ezingama-200 zezixhobo zemaski ngenyanga ukuhlangabezana nemfuno engqongqo yentengiso.
Ixesha Post: Sep-21-2020